Seychelles sekretera talen'ny fizahan-tany dia manolotra laharam-pahamehana ny departemanta
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Seychelles sekretera talen'ny fizahan-tany dia manolotra laharam-pahamehana ny departemanta
Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • fampiasam-bola • Vaovao • fanorenana • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Sekretera lehibe an'ny fizahan-tany Seychelles
Niditra tamin'ny anjara asany vaovao amin'ny maha sekretera lehibe an'ny fizahantany an'i Seychelles, Ramatoa Sherin Francis dia nihaona tamin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny mpanao gazety ao amin'ny Botanical House ny Alarobia 30 Jona, mba hanolotra ny laharam-pahamehan'ny departemantan'ny indostrian'ny fizahantany ary hiresaka ny fiovana eo amin'ny departemanta sy ny asany. .
Ny departemanta dia holazaina amin'ny fizahan-tany Seychelles momba ny fizahan-tany noho ny antony ara-barotra nambaran'ny sekretera lehiben'ny fizahan-tany Seychelles.
Fizarana telo lehibe no handrafitra ny Sampan-draharahan'ny fizahantany vaovao an'ny governemanta.
Ny fifantohan'ny fitondrana vaovao dia ny fanatsarana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanadiovana ny fanohanany ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Nilaza Ramatoa Francis fa ny fiovana mitranga eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany dia tsy misy fiantraikany amin'ny marika Seychelles fa noho ny antony ara-barotra dia antsoina hoe Seychelles fizahan-tany ity departemanta ity.
Manolotra ny fanovana tena ilaina indrindra, ny Sekretera lehibe dia nanamarika fa ankoatry ny sekretariat-ny, izay tompon'andraikitra amin'ny PR sy ny fifandraisana ary ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena, ny sampana fizahan-tany dia hisy fizarana telo lehibe.
Nohazavainy fa ny fizarana roa lehibe ao amin'ny departemanta, izay misy ny Diviziona Marketing Destination sy ny Destination Planning and Development Division, dia hifameno amin'ny asany tsirairay avy.
Raha nanome fanazavana momba ny laharam-pahamehana hataon'ny departemanta vaovao hifantohany dia nanambara Ramatoa Francis fa natao avokoa ny drafitra manoloana ny fotoan-tsarotra atrehin'ity orinasa ity. Mifanaraka amin'ny famerenana amin'ny laoniny, ny laharam-pahamehana dia ny mitady faritra izay ahafahan'ny departemanta mandanjalanja amin'ny fomba mandaitra ny harena ary miantoka ny fahombiazan'ny asa rehetra mifanaraka amin'ny rafitra mifehy ny indostria.
Ny fifantohan'ny fitondrana vaovao dia ny fanatsarana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanadiovana ny fanohanany ny indostria amin'ny alàlan'ny fampiofanana sy programa hafa hanatsarana ny fenitry ny serivisy.
Sehatra iray hisarika ny saina ihany koa ny hamahana ny banga amin'ny politika na paikadin'ny fizahan-tany efa misy. Hisy ny famerenana ny politikam-pizahan-tany ho an'ny serivisy isan-karazany ao amin'ity sehatra ity, hoy i PS Francis, hiantohana ny paikady rehetra mifanaraka amin'ny takiana amin'izao fotoana izao, indrindra manoloana ny firongatry ny valanaretina sy ny fizahan-tany vaovao. Raha ny fanazavan-dRamatoa Francis dia zava-dehibe izany hanamorana ny fanamorana ny fanolorana ny vokatra.
Manoloana ny fahavononan'ny departemanta hanatsara ny traikefa ho an'ny mpanjifa, nanambara ny PS ho an'ny fizahan-tany fa hanao fizahana ireo fotodrafitrasa sy serivisy omena ireo mpizahatany any Seychelles indrindra ny lafiny mahasarika, toerana ary traikefa. Ity fanazaran-tena ity dia hatao miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka isan-karazany ary hamantatra ny fisiany sy ny kalitaon'ny toerana sy serivisy fizahan-tany.
Izany dia hahafahantsika mahafantatra izay misy lesoka mba hanatsarantsika ny kalitaon'ny vokatra fizahan-tany izay ahafahanay manitatra ny sehatry ny marketing amin'ny toerana haleha, ny traikefa amin'ny mpitsidika ary ny famokarana vola. Izany dia hanampy antsika hamantatra ireo faritra mety hitomboan'ny Serivisy atolotra an'ireo mpitsidika ary hanampy anay amin'ny fampiasam-bola amin'ny alàlan'ny indostria.
Raha nanolotra sehatra iray tena mahahiahy izy, dia nanoro hevitra Ramatoa Francis fa hisy ny fanombanana mba hahatakarana ireo olana lehibe momba ny loharanon-karena olombelona ny sehatry ny fizahan-tany any Seychelles. Ny sampan-draharaha dia hiasa amin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny minisitera mifandraika amin'izany hamantarana ny antony mahatonga ny fitobahan'ny mpiasa ambony sy ny famokarana ambany miaraka amin'ny fikasana hamolavola fepetra fanitsiana.
Ny departemanta dia hanohy ny ezaka amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika, ny fifandraisan'ny nomerika ary ny fanamafisana ny fisian'i Seychelles amin'ny media sosialy, hoy i PS Francis nanoro hevitra, raha nanamafy fa ny saina manokana dia homena ny fahiratan-tsaina eo amin'ny tsena, ny statistika ary ny hevi-baovao entin'ny data.
Tamin'ny famaranana dia nanambara i PS Francis fa mba tena hahatsapantsika ireo drafitra dia misy lafiny lehibe ilaina amin'ny fiaraha-miasa tokony hotehirizina sy tohana miainga amin'ny sehatra tsy miankina ka hatramin'ny sehatra tsy miankina. Ny fiaraha-miasa sy ny fifanakalozan-kevitra mitohy amin'ireo andrim-panjakana hafa manomboka amin'ny fanaraha-maso ka hatramin'ny fanaovana politika dia tena ilaina, hahazoana antoka fa mifanaraka daholo ny asa na ny serivisy fanampiana rehetra hampandroso ny indostria.